Aqoonkaab Haaraha Wajiga | Aqoonkaab
Dec 20, 2018Caafimaadka
Waxaan raba inaan ka hadlo dhibatada ka haysta dumarka haaraha, kuwaasoo runtii hablo badani isoo waydiin waxa keena iyo sida loo daweya ama leyskaga baabin kara .
WAA MAXAY HAARAHA ?
Haaruhu waa goobaabin kamidab badalan jirka intiissa kale waxayna kasoo bixi kartaa meelkasta oo oo qofka jirkiissa kamid ah balse wajiga ayaa ugu badan gaar ahaan dhabbannada .
Haraaha waxay ku dhaacaan Raga iyo dumar ka aan uurka lahyn iyo waliba kuwa uurka leh uurka leh waxana loo yaqaana (melasma & the mask of pregnancy).
MAXAA KEENA AMA SABABA HAARAHA ?
Haaraha waxa uu ku yimaada xaaladao kala duwan sida:
• UURKA: Dumarku markay uurka leeyihiin waa dadka ugu badan ee ay ku dhacaan haarahani, waayo dhiigeedu wuu ka badan yahay ka dadka caadiga ah, (hormones) kooduna wuu Is badalayaa.
• WELWELKA: walwalka ama stress ka aad ayuu u ziyaadiyaa haaraha wajiga.
• CADCEEDA AMA QORXADA: qoraxada badan oo jidhkaga ku dhaxda gaar ahaan xilyada duhurka waa’yo waxaa kubadan wax looyaqaan (UV) waxay ukeenaysaa in jirka biyihiisa kadhammaadaan sidoo kale waxay dilaysa maadada Alle inoo abuuray oo masuulka ka ah jirka midabeenteeda iyo sidoo kale waxay dilaysaa qorraxdaassi maadada (collagen) oo ah Protein jirkeenna uusoo daayo qaabilsan qurxinta maqaarkeenna .
• QAAR KA MID AH CREAM : Qofka oo isticmaalay kareem gubay jirkiissa kareem kaasoo u waxyeeleeye sida aan qorraxduba kusoo sheegay.
• XANUN: Qofka oo laga yaabo in uu jiro xanuun xagga caloosha ah ama ay hayso nafaqo darro aad udaran.
• DAAWOYINKA: gaar ahaan daawoyinka uurka loga hortago iyo waliba qaar kamid ah qalajiyaasha sida qallajiyayaasha sida:Tetracycline , Sulfonamides. Iyo daawoyin kale oo badan.
SIDEY LOGAGA HORTAGI KARAA HARAHA WAJIGA?
• Waa in aad iska ilaalisaa cadceeda gaar ahaan xilyada cadceeda eey kulushahay oo aa asiticmaashaa karimka qoraxada (sun cream).
• Xiliyada hooyada uurka eey leydahay waa in eey isticmaasha ama marsato kareem cad ceeda ka ilaaliya .
• Sidoo kale waa muhiim ah xilayada kuleelka uu jiro aan wajiga marsto wax yaabah dabiicga.
• Iska yarey Welwelka ma keena haahar oo kaliya waxa uu sababa cudura badan oo Qatar galin kara naftaada
SIYAABAHA DABIICIGA AH EE LAGU DAWEYO HAARAHA.
1= waxaa marineysaa Dacartu ama AloeVera maalintii 3 jeer aad ayuu ugu wanaagsan haraga oo waxa uu baabiyaa guud ahaan haraha wajiga.
2= waa in aad cuntaa cuntoyinka eey ku badan yihin madada lutein ka iyo Zinc sida kostada, cuntoyinka gagaran iyo fruits ka sidoo kale muuska qobkis waxaa marisa haraha maxaa yeelay madada lutin ka ku jira.
3= waxaa kaloo haraha marisaa liin dhananta waa anti “anti-oxidant” oo jirka ka saaro wixii sunta ah iyo unugyada dhintahy ee saran haraga.
4= sidoo kale waxaa isku dareysaa Essential Oil iyo coconut oil waxaa marineysaa haraha waxey baabinayaan ama eey ka hortagyaan haraha wajiga.
5= Waa in aad cuntaa Cuntooyin ay ku jiraan (Vitamin C & E).
Inta aanan uguda galin sida loo daaweyo, waxaa idin kula talinyaa qof waliba wajigisa haara uu leyahahy in eeysan iska marasan daawo ama kareem waliba waxaa suura gala ah in aad kala kulnto dhibaatoyin aad u daran gaar ahaan xaga wajiga.
• Dumarka uurka leh way ka tagaan harahani markay umulan ka bacdi hadii anay wax khaldan marsan! Oo eey isticmaalan kareem qoraxada ka difacyo (sun cream) iyo waliba wax yaabaha dabiiciga.
• Wajiga oo saliida badan ee ka soo baxaysa markay (hormones) ku is badalan la ilaaliyo oo had iyo jeer la nadiifiyo, qofkii awoodaa inuu isticmaalo (facial scrubs & facial Cleanser) kuwana dila jeermiska ku dhasha jidhka.
• Isticmaal Creams-ka loo yaqaaan (sun cream) oo qof ku markasta ka marsado
Previous PostHypothyroidism-Cudur Haweenka Soomaalida Ku Badan Next PostJoonis Cadka ( Hepatitis B )